Akhri: Guddi warbixin kasoo saaray kufsiga lagu eedeeyey Amisom – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Guddi warbixin kasoo saaray kufsiga lagu eedeeyey Amisom
A warsame 20 October 2014
Mareeg.com: Taariikhda marka ay ahayd 18/10/2014 waxaa uu ku simaha Ra’isul Wasaaraha xukumadda Soomaaliya Khaliif Axmad Ereg uu magacaabay guddi soo baara eedeymaha la xiriira kufsiga iyo tacadiyada kale ee lagu tuhmaayo ciidamada AMISOM.
Guddigaani waxaa uu ka kooban yahay afar xubnood oo kala ah:
1- Xildhibaan Khadiijo Maxamad Diiriye: Guddoomiye
2 -Xildhibaan Maxamad Cali Xagaa: Xubin
3 -Xildhibaan Burci Maxamed Xamsa: Xubin
4 -Mudane Xasan Warsame Cali: Xubin
Guddigaani wuxuu maanta oo taariikhdu tahay 20 ka Bisha Oktoobar yeeshay kulankiisii ugu horeyay dood iyo falanqeyn dheer kadib waxaa ka soo baxay war saxaafadeed kaan soo socda.
1-In qiimeyn iyo baaris lagu sameeyo jiritaanka dhacdadaan.
2- In hadii ay jirto dhacdadaani kagu dhaqaaqo talaabadii ugu haboon looga qaadi lahaa.
3-Guddigaani wuxuu soo magacaabi doonaa guddi madax banaan oo khibrad u leh arrimaha xadgudubka jinsiga ku salaysan (kufsiga) guddigaasi oo raadin doona dadka lagu sheegay in dhibanayaal ay yihiin iyo hadii ay jiraan marqaatiyaal.
4 -Guddiga Wasiirada waxey la kulmi doonaan qubaro ka socda midowga Afrika iyo waddamada ay ciidamada ka joogaan dalka.
5 -Guddiga wasiiradda waxey raadin doonaan cid walba oo gacan ka geysan karta macluumaadka Baarista dhacdadani.
6-Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go’aan sidii looga jawaabi lahaa jiritaanka dhacdadani hadii ay jirtana waxay xukuunadda siin doontaa dhibanayaasha caawin dhinaca dhimircelinta iyo kaalmooyin kale ay u baahan yihiin wexayna ka jawaabaysaa sidii cadaalad loo marsiin lahaa cidii ay ku caddaato.
7-Ugu dambeyntii guud ahaan Dowladda Jamuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go,an ka hortaga nooc kasta oo ka mid ah xadgudubyada xuquuqda Aadanaha iyo ka ja waabiddooda.
Categories Select Category Af Soomaali (10,685) Africa (2,397) Algeria (4) Angola (11) Burkina Faso (1) Burundi (14) Cameroon (32) chad (7) congo (61) Djibouti (29) Egypt (68) Eritrea (48) Ethiopia (175) gabon (2) gambia (6) Ghana (21) guinea (1) Guinea-Bissau (4) Ivory Coast (5) Kenya (273) Liberia (23) Libya (76) mali (8) Mauritanian (1) Morocco (20) Namibia (2) niger (8) Nigeria (55) rwanda (15) Sierra Leone (13) South Africa (91) south sudan (94) sudan (41) Tanzania (16) Tunisia (10) uganda (55) Zambia (16) Zimbabwe (27) Asia (427) Afghanistan (19) Bangladesh (4) china (218) India (24) indonesia (12) Malaysia (1) mynamar (6) north korea (2) pakistan (17) Philippine (3) Singapore (1) Australia (16) Business (291) Business (6) canada (1) Economy (168) Editorial (521) Education (39) Entertainment (67) Europe (629) Austria (9) belgium (1) France (26) German (38) Ireland (3) Italy (18) Rusia (35) spain (37) turkey (43) Ukraine (4) United Kindom (185) Exclusive (7) Fashion (4) Featured (8,331) Food (54) Health (241) Horn of Africa (165) Islam (84) Mareeg العربية (3) Middle East (400) Iran (16) Iraq (37) Israel (58) kuwait (4) qatar (10) Saudi Arabia (58) syria (40) UAE (11) Yeman (29) Notices (6) Opinion (59) Our Contacts (1) politics (54) Science (67) Senegal (2) sheeko-jaceyl iyo love (5) sidebar (3) Somalia (5,463) Archive of mareeg (12) Sports (290) technology (58) travel (8) ubax-sheeko.htm (1) Uncategorized (252) United states of america (254) World news (599) PARAGUAY (1) Venezuela (4)
Latest: Five dead as blast hits tea ship in Somalia